အားလုံးအတွက်မျှော်လင့်ချက် - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာချီဘုရားကျောင်း
ယေရှုနောက်လိုက်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်သခင်ယေရှု၌ဘုရားသခင်ပေးသောရွေးနုတ်ဖိုးအသက်တာ၌ပါဝင်ခြင်းသည်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ ၎င်းသည်စစ်မှန်။ စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်အသက်တာကိုဥပမာအားဖြင့်နေထိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ တမန်တော်ပေါလုကဤသို့ထပ်မံပြောဆိုသည် -“ သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဗိမာန်ဖြစ်သည်ဟုသင်တို့မသိကြသလော။
ကလေးများရှိသည့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏မေးခွန်းအနည်းငယ်ကိုကျွန်ုပ်မေးသည်။ အကယ်၍ ဟုတ်ကဲ့ဟုဖြေပါကအခြားမိဘများနည်းတူကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကလေးကိုမနာခံမှုအတွက်အပြစ်ပေးဖူးသလားဆိုတဲ့ဒုတိယမေးခွန်းကိုမေးမိသည်။ ပို၍ ရှင်းလင်းစွာပြောရန် -“ အပြစ်ဒဏ်ဘယ်တော့မှအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမင်းရဲ့ကလေးကိုမင်းရှင်းပြခဲ့သလား။ ” ဒါအရူးလား၊ ငါတို့သည်အားနည်းသောသူဖြစ်ကြ၏ ...
သင်၏ခရစ်ယာန်အသက်တာတစ်ခုလုံးကိုအကျဉ်းချုပ်ထားသောကျမ်းပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ကိုသာသင်ရွေးချယ်နိုင်ပါကမည်သည့်အရာဖြစ်မည်နည်း။ ဤကိုးကားချက်အများဆုံးကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် -“ ဘုရားသခင်သည်ဤလောကကို ချစ်၍ မိမိ၏တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းငှာဤလောကကိုအဘယ်ကြောင့်ချစ်တော်မူသနည်း။ ” (ယော ၃း၁၆) ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခု။ ကျွန်ုပ်အတွက်တော့သမ္မာကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးကအရေးအကြီးဆုံးအချက်ကိုအောက်ပါအခန်းငယ်ကဖော်ပြသည် -“ ထိုနေ့၌သင်တို့သည် ...
ospel ၀ ံဂေလိတရား - ငါတို့ကိုဘုရားသခင်ချစ်ကြောင်းကြေငြာခြင်း
ခရစ်ယာန်များစွာသည်မသေချာမရေရာဖြစ်နေပြီးဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုချစ်ဆဲဆဲလား။ ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုနှင်ထုတ်လိမ့်မည်ဟု ပို၍ စိုးရိမ်သည်။ သင်အလားတူကြောက်ရွံ့မှုမျိုးရှိနိုင်သည်။ ခရစ်ယာန်တွေကဘာကြောင့်ဒီလောက်စိုးရိမ်ပူပန်ကြတာလဲ။ အဖြေမှာရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာအပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်။ သင်၏အမှားများ၊ သင်၏အမှားများကိုသင်သတိပြုမိသည်။
လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် တစ်စုံတစ်ဦးသည် ဆုံးရှုံးသွားသောအရာကို အသဲအသန်ရှာဖွေနေသောအခါ၌ သခင်ယေရှုပြောသော ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိရသည်။ ပျောက်ဆုံးသွားသောဒင်္ဂါး၏ ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်- "ဒါမှမဟုတ် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်မှာ ဒရာမာဆယ်ချပ်ရှိပြီး တစ်ပြားဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်ဆိုပါစို့" ဒရာမာသည် ရောမဒေနာရိ၏တန်ဖိုး သို့မဟုတ် ဖရန့်နှစ်ဆယ်ခန့်ရှိသော ဂရိဒင်္ဂါးဖြစ်သည်။ "မီးထွန်းပြီး တစ်အိမ်လုံးကို ဇောက်ထိုးလှန်မလို့လား...
အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုနဲ့မင်းဆီကိုငါပြန်လှည့်လာတယ် - မယုံကြည်သူတွေကိုမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ။ ငါထင်တာကငါတို့ရှိသမျှသည်ဆင်ခြင်သုံးသပ်သင့်သည်။ အမေရိကန်အကျဉ်းထောင်အဖွဲ့နှင့် Breakpoint ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုတည်ထောင်သူ Chuck Colson ကဤမေးခွန်းကိုတစ်ချိန်တည်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပြခဲ့သည်။ မျက်မမြင်တစ် ဦး သည်သင်၏ခြေထောက်ပေါ်သို့တက်လျှင်သို့မဟုတ်သင်၏ရှပ်အင်္ကျီပေါ်တွင်ကော်ဖီပူပြင်းလျှင်သင်သူ့ကိုစိတ်ဆိုးမည်လော။ သူကကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်ဖြေတယ်၊
ရောမ 10,1-15: လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းပါ။
ပေါလုက ရောမဘာသာဖြင့် ဤသို့ရေးသည်– “ချစ်လှစွာသော ညီအစ်ကိုညီအစ်မတို့၊ အစ္စရေးလူတို့အဖို့ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ဆုတောင်းပြီး ဘုရားသခင်ထံတော်မှ သူတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါစေ” (ရော. 10,1 NGÜ)။ သို့သော် ပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့သည်– “ဘုရားသခင်၏အကြောင်းကြောင့် သူတို့သည် ဇွဲမလျော့ဘဲ၊ အဲဒါကို ကျွန်တော် သက်သေခံနိုင်ပါတယ်။ သူတို့မရှိတာက မှန်ကန်တဲ့ အသိပညာပါ။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း အကြောင်းကို မသိကြဘဲ ၎င်းတို့၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း အားဖြင့် ဘုရားသခင် ရှေ့တော်၌ ရပ်တည်ရန် ကြိုးစားကြသည်။ ...
ဘုရားသခင့်အံ့သြဖွယ်ခွင့်လွှတ်မှုသည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်မည်မျှတကယ့်ကိုသဘောပေါက်နားလည်ရန်ပင်ခက်ခဲကြောင်းဝန်ခံရမည်။ ဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုအစ မှစ၍ သူ၏ရက်ရောသောလက်ဆောင်အဖြစ်၊ သားတော်မှတစ်ဆင့်အလွန် ၀ ယ်ထားသော ၀ ယ်ယူပြီးခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ခြင်းလုပ်ရပ်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ သူသည်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံခြင်း၏အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရရုံမျှမက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းခံရသည်။
ငါဘာကြောင့်နေနေတာလဲ ငါ့ဘဝမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား။ ငါသေသောအခါဘာဖြစ်သွားမလဲ လူတိုင်းလူတိုင်းအရင်ကမိမိကိုယ်ကိုမေးခဲ့ဖူးသောအခြေခံမေးခွန်းများ။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အဖြေပေးမည့်မေးခွန်းများနှင့်ဖြေသင့်သည် - ဟုတ်ကဲ့၊ ဘဝသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ သေပြီးတဲ့နောက်အသက်ပြန်ရှင်လာတယ်။ သေသည်ထက်အဘယ်အရာမျှလုံခြုံသည်။ တစ်နေ့မှာချစ်ရသူတစ် ဦး ဆုံးပါးသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိကြသည်။ ငါတို့လည်းသေရမယ်ဆိုတာရုတ်တရက်သတိရလိုက်တယ်။
ငါစွဲလမ်းတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံရန်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ ကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့်ကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသူများကိုလိမ်ပြောခဲ့သည်။ ကိုကင်း၊ ဘိန်းဖြူ၊ ဆေးခြောက်၊ ဆေးရွက်ကြီး၊ ဖေ့စ်ဘွတ်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများစသည့်အရာအမျိုးမျိုးကိုစွဲလမ်းနေသည့်စွဲလမ်းသူများစွာနှင့်ကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, တစ်နေ့မှာတော့ငါအမှန်တရားကိုရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါစွဲလမ်းနေတယ် ကျွန်တော်အကူအညီလိုအပ်တယ်! စွဲလမ်းမှု၏ရလဒ်များအားလုံးသည်ဘုံဖြစ်သည်။
မကြာခဏ ကျမ်းချက်များကို အနီးကပ်ကြည့်ရှုရန် ကူညီပေးသည်။ ယေရှုသည် အထင်ကြီးလောက်သော သရုပ်ပြမှုနှင့် အလုံးစုံသော ဟောပြောချက်တစ်ခုကို ဂျူးများ၏ ထိပ်တန်းကျမ်းပညာရှင်နှင့် အုပ်စိုးရှင် နိကောဒင်နှင့် စကားပြောစဉ်တွင် ဟောပြောခဲ့သည်။ “အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကို စွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင် လောကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏။” (ယော. 3,16) သခင်ယေရှုနှင့် နိကောဒင်တို့သည် တူညီသောခြေရင်းဖြင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည် - ဆရာမှ ...
လူ့ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်နှင့်အလိုတော်ကိုနားလည်မှုလွဲလေ့ရှိသည်။ များသောအားဖြင့်လူတို့သည်မိမိတို့၏စွမ်းအားကိုအခြားသူများအပေါ်လွှမ်းမိုးရန်နှင့်လွှမ်းမိုးရန်အသုံးပြုကြသည်။ လူသားအားလုံးအတွက်လက်ဝါးကပ်တိုင်၏တန်ခိုးသည်ထူးဆန်း။ မိုက်မဲသောအယူအဆဖြစ်သည်။ အာဏာ၏လောကအယူအဆသည်ခရစ်ယာန်များအပေါ်နေရာအနှံ့သက်ရောက်မှုရှိစေပြီးကျမ်းချက်နှင့် ospel ၀ ံဂေလိသတင်းတရားကိုအထင်လွဲမှားစေနိုင်သည်။ "ဒါကောင်းတယ်…
ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားတရားမျှတသည်ဟုမှတ်ယူကြောင်းခရစ်တော်အားကြွေးတင်ကြောင်းရောမ၌ထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တခါတရံအပြစ်ပြုသော်လည်း၊ ထိုအပြစ်များကိုခရစ်တော်နှင့်အတူလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေသတ်ခဲ့သောမိမိကိုယ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များသည်ခရစ်တော်၌ရှိသောအရာများနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ကယ်တင်ခြင်းသို့မရောက်ရန်အပြစ်တရားကိုတိုက်လှန်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခန်း ၈ ၏နောက်ဆုံးအပိုင်း ...
အနောက်နိုင်ငံများတွင်ခရစ်စမတ်သည်လူများစွာသည်လက်ဆောင်များပေးခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းကိုပြုလုပ်သောအချိန်ဖြစ်သည်။ ချစ်ရသူများအတွက်လက်ဆောင်များရွေးချယ်ခြင်းသည်ပြproblemနာဖြစ်သည်။ လူအများစုသည်ဂရုစိုက်မှု၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်သို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုပြုလုပ်သောအလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်အထူးလက်ဆောင်ကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်ဘုရားသခင်သည်ဘုရားသခင်သည်သူ၏တီထွင်ဖန်တီးထားသောလက်ဆောင်ကိုလူသားများအတွက်နောက်ဆုံးအကြိမ်တွင်မပြင်ဆင်ပါ။
“မျှော်လင့်ချက်က နောက်ဆုံးသေတယ်” ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်၊ ဒီစကားမှန်ရင် သေခြင်းတရားဟာ မျှော်လင့်ချက်ရဲ့ ဆုံးခန်းပါပဲ။ ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့ တရားဒေသနာတွင် ပေတရုသည် သေခြင်းဖြင့် ယေရှုကို ထိန်းထားနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်– “ဘုရားသခင်သည် (ယေရှု) ကို ထမြောက်စေ၍ သေခြင်းဝေဒနာဘေးမှ ကယ်နုတ်တော်မူပါ။ (တ. 2,24) ပေါလုသည် နောက်ပိုင်းတွင် ခရစ်ယာန်များသည် ဗတ္တိဇံ၏သင်္ကေတတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း မလုပ်ကြကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။